FARMAAJO: Hay’adaha dowladda waa inay dar-dargeliyaan howlaha gurmadka Fatahaadaha + (SAWIRRO). | HalQaran.com
Home Wararka Maanta FARMAAJO: Hay’adaha dowladda waa inay dar-dargeliyaan howlaha gurmadka Fatahaadaha + (SAWIRRO).
FARMAAJO: Hay’adaha dowladda waa inay dar-dargeliyaan howlaha gurmadka Fatahaadaha + (SAWIRRO).
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta socdaal u kuur-gal ah ku tagay magaalada Baladweyne ayaa la wadaagay bulshada iyo maamulka heer Degmo iyo Heer Dowlad Goboleed ee Hirshabeelle sida ay uga go’an tahay hay’adaha heer Federaal samata-bixinta dadkeenna dhibaataysan iyo xal u helista musiibadan dabiiciga ah.
“Halkan waxaan u imaannay in aan idinla qeybsanno xanuunka iyo dhibka aan ka aragnay fatahaadahan oo soo noqnoqday. In kasta oo tabarteenno la egtahay waa in aan u istaagnaa ka hortagga dhibaatooyinkan. Waxaan Alle naxariistiisa Janno u weydiinaynaa dhammaan muwaadiniinta nooga shahiiday.”.
dardargelinta gurmadka fatahaadaha
Farmaajo faray hay'adaha dowladda